Indlela yeKonmari: indlela eqondile yokuhlela ikhaya lakho | Bezzia
Indlela yeKonmari: indlela eqondile yokuhlela ikhaya lakho
UMaria vazquez | 11/05/2021 12:00 | Ikhaya
Bambalwa abantu abazosala abangakazwanga ngoMarie Kondo okwamanje. I- Isazi senhlangano yaseJapan Uguqule imakethe yezincwadi ngeMagic of Order, incwadi lapho achaze khona ukuthi ahlelwe kanjani izikhala unomphela ngendlela yakhe elula yeKonMari.
Yini indlela yeKonmari? Iyini imfihlo yokuphumelela kwakho? Yile mibuzo elula esiyiphendula namhlanje ukuze ukwazi ukuyisebenzisa kulezo zindawo zasekhaya lakho lapho ucabanga ukuthi udinga usizo olwengeziwe. Kumele ngivume ukuthi ngasebenzisa le ndlela ngokwami ​​nokuthi eminyakeni eyi-10 kamuva, ngingaqinisekisa ukuthi ukulandela ifilosofi yakhe lezo zikhala engangigxile kuzo zisahleleke kahle.
Angivamile ukuzivumela ngiqondiswe yimfashini. Kepha indlela yeKonmari yafika ngesikhathi lapho ngangidinga ukuhlela impilo yami, ngokujwayelekile. Ngakho-ke ngisebenzise le ndlela kanzima futhi namuhla ngiyaqhubeka nokuyisebenzisa kulezo zikhala ebezivame ukuba neziminyaminya ngaphambili, njengezimpahla zokugqoka, amaphenti nezindawo zokusebenza. Ngeke ngiphike ukuthi ekuqaleni kungaba nezinxushunxushu - akekho kithi othanda ukuguqula indlu ayibhekise phansi - kepha kuyadingeka ukuthi isebenze. Ngabe ufuna ukusisebenzisa nasemakhaya akho? Lezi yizinyathelo okufanele zilandelwe kafushane:
2 Kusebenzise ngezigaba
3 Khetha bese udedela
4 Thola isayithi lakho nokuhleleka
5 Gcina ukuhleleka
Indlela yeKonmari idinga ushintsho olukhulu ukuthi ngaphandle kokuzibophezela kuzoba nzima ukukufeza. Ngaphambi kokuqala kufanele uqiniseke ukuthi ufuna ukushintsha izinto, ukwazi ukubona ngeso lengqondo izinguquko ofuna ukuzenza futhi ukholwe ukuthi ungazifeza. Kuyisinqumo sakho, ngakho-ke kufanele uhlale ukhumbula ukuthi abanye bomndeni bangazinikela kuwe noma bangazibophezeli kuwe.
Esinye sezici ezihlukile kakhulu zendlela yeKonmari ukuthi kusetshenziswa ngezigaba: izingubo, izincwadi, amaphepha, i-komono (okuxubile, zonke izinto ezingangeni kwezinye izigaba) nezinto zemizwa. Kungale ndlela kuphela lapho kungenzeka khona ukuthola umbono walokho esinakho nokuthi sinamalini kulokhu noma lokho.
Isibonelo engicabanga ukuthi sizosiza ukuqonda lo mqondo. Lapho uhlela izingubo zakho, kufanele uqoqe zonke izingubo zakho esikhaleni somzimba esifanayo kungakhathalekile ukuthi uzigcine kuphi: igumbi lokulala, igumbi eliphezulu, ihholo ... Kungabonakala kungaphezu kwamandla ekuqaleni, kepha uzokwazi kakhulu ngemuva kwalokho onakho, okuthandayo noma okufunayo.
Sebenzisa le ndlela ngezigaba, uwahlukanise uma kudingeka. Qala ngezinto ezilula bese uzama ukuqala nokuqeda ngosuku olulodwa. Uma uqala ngezingubo futhi unevolumu enkulu yezingubo, phatha isigaba nsuku zonke: izingubo zangaphandle, izingubo ezingezansi, izingubo ezingenhla, izesekeli ... Ukuzama ukumboza okungaphezu kwalokho ongacabanga ukuthi kuvame ukuba nomphumela ophindaphindiwe.
Khetha bese udedela
Lapho usuqoqe zonke izinto zesigaba esifanayo esikhaleni esifanayo, sekuyisikhathi sokuthatha into ngento ezandleni zakho bese unquma ukuthi uzohlala noma uhambe. UMarie Kondo usimema ukuthi singalondolozi akukho lutho ekhabethe lethu elingasijabulisi.
Masithathe i-athikili yengubo njengesibonelo. Uma ungayigqokanga ngonyaka odlule, kungenzeka awuyithandi noma ayikwenzi uzizwe kamnandi. Kungani uyilondoloze? Ivalelisa engxenyeni ngayinye ngokubonga ngomsebenzi wakho owunikelile bese unikela ngayo ukuze abanye bayijabulele.
Thola isayithi lakho nokuhleleka
Uma ukukhethwa sekwenziwe, thola indawo ethile yento ngayinye. Cabanga ngakho kahle bese uthola indawo ewusizo kakhulu noma enethezekile, ngaleyo ndlela kuzoba lula ngendlu yakho ukuthi ihlale ihlanzekile. Umqondo ukuthi lapho usukhethile futhi uthole into ngayinye endaweni yayo, kufanele ugcine ukuhleleka kuphela.
Ungahlanyi ngokuthenga abahlukanisi noma amabhokisi ukuhlela lezi zinto, awuzidingi. Ukuhleleka kokuqala nasesikhathini esizayo uma ucabanga ukuthi kuyadingeka, engeza okunye noma uzophazanyiswa ubujamo ungagxili ngemuva. Beka okusebenzisa kakhulu phambi kwamakhabethe anokujula okuningi, futhi funda ukugoqa izingubo zibheke phezulu. Ngeke ugcine isikhala kuphela, kodwa uzokugwema ukuthi lapho uthatha ingubo enye ingakhubazeki.
Uma usuzihlelile zonke izigaba namathela esimisweni. Uma okuthile okusha kufika ekhaya, kwenzele indawo lapho kufanele khona bese ulahle lokho okukushintshayo. Kuzokusiza futhi ukugcina ukuhleleka ngokubuyisela izinto kusayithi labo lapho uthola ukuthi azikho lapho kufanele zibe khona. Kuzokuthatha imizuzu emibili ukukwenza.
Indlela yeKonmari iyasisiza sihlele amakhaya ethu. Kuyindlela okufanele isetshenziswe ngobulukhuni obuthile kepha ngemuva kwalokho, uma isunguliwe, kufanele siyenze iguquguquke. Izimo zethu ziyashintsha, izinto ezisizungezile futhi kwesinye isikhathi kuyadingeka ukwenza izinguquko.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » Indlela yeKonmari: indlela eqondile yokuhlela ikhaya lakho
U -lex Casademunt uthola inkokhiso yakhe ebilindelwe kakhulu
Iphalishi lesinamoni lamathanga